कोरोनाका सयौं बिरामी बचाएका डाक्टर विवेकले नै यस’री गरे देह’त्याग ; जाने’बेलामा भने : ” सबैजना सुरक्षित रहनुहोस् है।” – Sadhaiko Khabar
कोरोनाका सयौं बिरामी बचाएका डाक्टर विवेकले नै यस’री गरे देह’त्याग ; जाने’बेलामा भने : ” सबैजना सुरक्षित रहनुहोस् है।”
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: २२:२६:१३
काठमाडौ/ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना डाक्टरले दे’ह त्या’ग ग’रेका छन् । दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालको कोरोना वार्डमा खटिएका ३५ वर्षीय डाक्टर विवेक रायले देह त्या ग ग रेका हुन् ।
कोरोना भाइरस महा’मारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विवेक निकै त ना वमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । दिल्ली प्रहरीले विवेकलाई साडीको सहायताले पंखामा झु न्डि एको अ व स्थामा फे’ला पारेको थियो । प्रहरीले रायको कोठामा सु सा इड नो ट पनि फे ला पारेको छ ।
नोटमा उनले आफूखुसी दे’ह त्या ग ग गरेको उल्लेख गर्नुका साथै सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन् । डा. राय पछिल्लो एक महिनादेखि कोभिड वार्डमा काम गरिरहेका थिए । भारतीय मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व निर्देशक डा. रवी वानखेडकरले विवेक सक्षम डाक्टर भएको र उनले महा’मारीको समयमा सयौंको ज्या’न बचाएको बताएका छन् ।
‘कोरोेनाका कारण ज्या’न गुमा’उनेको संख्या बढ्दै गएपछि विवेक डिप्रे’सनमा गएका थिए । महा’मारीबाट आ’जित भएका उनले जी’वन स’माप्त नै पार्ने नि’र्णय गरे,’ डा. वानखेडकरले भनेका छन् । यो घट’नाले स्वास्थ्यकर्मीमा थप निरा’शा बढेको भन्दै उनले भारतमा खराब विज्ञान, खराब राजनीति र खराब शासन भएको टिप्पणी गरेका छन् । (एजेन्सीको सहयो’गमा)
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई ५०० शैय्याको कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ स’ङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)का संयोजकसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, सिसिएमसी हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल र वीर अस्पतालका प्रतिनिधिसँग अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोरोना भाइरसका बिरामी उपचार गर्ने गरी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चाँडै नै उक्त भवनमा सङ्क्र’मितको उपचारका लागि आइसो’लेशन शैय्या सञ्चालनको तयारी थालेको छ । आजै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको निजी तथा सरकारी अस्पतालमा एक हजार शैय्या थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसका सङ्क्र’मित बढिरहेकाले अस्पतालमा शैय्याको अभाव भएको गुनासो आएपछि सिसिएमसीले विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आजै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज गेलाललाई टेलिफोन गरी कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो ।